दोहोरीको भिडियोमा खेल्ने मोडलको पारिश्रमिक कति ? - Himal News Express
दोहोरीको भिडियोमा खेल्ने मोडलको पारिश्रमिक कति ?
हिमाल समाचार २६ पुष २०७७, आईतवार ११:०६ 148 पटक हेरिएको
गायकद्धय प्रकाश सपूत, दुर्गेश थापा लोकदोहोरी गीतका भिडियोमा काम गर्ने महंगा मोडल हुन् । उनीहरुले ५० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छन् । त्यस्तै, अहिले मोडल रियाशा दाहालको माग पनि लोकदोहोरीमा राम्रै छ । उसो त, उनका भिडियोले गतिलो भ्यूज भने पाउन सकेका छैनन् ।
गायक रामजी खाँण पनि केही समय पहिलेसम्म लोकदोहोरी भिडियोमा बाक्लै देखिन्थे । हिजोआज भने रामजी पनि केही सुस्ताएका छन् । उनले एउटा भिडियोमा अभिनय गरेको २० देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छन् । यस्तै, खेम सेञ्चुरीले लोकदोहोरी गायकका रुपमा मात्र नभई कलाकारका रुपमा पनि राम्रो पहिचान बनाएका छन् । उनका धेरै गीतले दर्शकको मन जितेका छन् । उनी पनि राम्रै पारिश्रमिक लिन्छन् ।
रञ्जिता गुरुङ, महेन्द्र गौतम, सगुन शाही, आशा खड्का लगायत पनि लामो समयदेखि लोकदोहोरीमा सक्रिय छन् । उनीहरुको लोकदोहोरीमा व्यस्तता पहिलेजस्तो नभएपनि निरन्तर काम भने गरिरहेका छन् । यी मोडलहरु पनि १५ देखि ३० हजार पारिश्रमिकमा लोकदोहोरी भिडियोमा काम गर्दै आएका छन् ।
एक लोकदोहारी भिडियो निर्देशकले अनलाइनखबरसँग भने–‘३–४ जनालाई छाड्ने हो भने अधिकांशको डिमाण्ड १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ । कोही १५ हजारमै पनि खेल्छन् । कोहीले ३० हजारसम्म माग्ने गरेका छन् । पारिश्रमिकमा सम्बन्धले पनि अर्थ राख्ने निर्देशकहरुको भनाई छ ।
लोकदोहोरीमा महंगो पारिश्रमिक लिएर चलचित्रका कलाकारहरु देखिन थालेसँगै लोकदोहोरी भिडियोमा काम गर्दै आएका मोडलहरुले पारिश्रमिक भने केही बढाएको निर्देशकहरु बताउँछन् । अनलाइनखबर (शुशिल नेपाल)
यूटुवमा ‘बालो जोबन’
‘बकि बकि स्यो’को भिडियो
सामाजिक कथामा ‘छाउपडी गोठ’
राजन र कमलाको स्वरमा
‘शुभसाइत’मा छुट्टिनै गाह्रो (भिडियो)
लोक गीतमा आँधी (भिडियो)